बागलुङमा विश्व क्षयरोग दिवस: चालु आवको ८ महिनामा १०४ नयाँ क्षयरोगी भेट्टिए ! – ebaglung.com
बागलुङमा विश्व क्षयरोग दिवस: चालु आवको ८ महिनामा १०४ नयाँ क्षयरोगी भेट्टिए !
२०७३ चैत्र १२, शनिबार ०७:०२	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
नारायण रिजाल, बागलुङ २०७३ चैत १२ । ‘क्षयरोग अन्त्यका लागि एक हौ’ भन्ने मुल नाराका साथ बागलुङमा शुक्रबार विश्व क्षयरोग दिवस मनाईएको छ । दिवसको अवसरमा बागलुङ कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको र बागलुङ नगरपालिका निरहे घाटमा रहेको बृद्धाश्रममा रहेका जेष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
सो अवसरमा कारागारमा ६६ जना पुरुष ११ जना महिला गरी ७७ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण तथा क्षयरोगका लागि खकार जाँच गरिएको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजना धौलागिरी अंचल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा संचालित शिविरमा युआरएल ल्याब पोखराको पनि सहयोग रहेको थियो । त्यसै गरी निरह रहेघाटमा रहेको बृद्धाश्रममा २४ जना जेष्ठ नागरिकको क्षयरोगको खकार तथा अन्य स्वास्थ्यपनि जाँच गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुव्र गिरीले क्षयरोग दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको काम निकै सराहनीय रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा धौलागिरी अंचल अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर सागरकुमार राजभण्डारीले क्षयरोगको बारेमा प्रकाश ।
बागलुङमा यो वर्ष १ सय ४ जना क्षयरोगका बिरामी फेला परेका छन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को हालसम्ममा ७४ जना पुरुष र ३० जना महिला क्षयरोगका बिरामी रहेका छन । जिल्लाको दगान्तुडाडामा सबै भन्दा बढि १४ जनामा यो रोग देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका क्षयकुष्ठ सुपरभाईजनर देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।
जिल्लामा हाल ८ वटा क्षयरोग केन्द्र अन्र्तगत बाटाकाचौर, बुर्तिबाङ, कुश्मिसेरा, हरिचौर, बोहोरागाउँ, आरोग्य मेडिकल खरबाङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र धौलागिरी अंचल अस्पतालमा क्षयरोगको खकार परिक्षण हुदै आएको छ । जिल्लामा सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवाबाट यस रोगको उपचारका लागि औषधी वितरण भै रहेको छ ।
बिगतको बर्षको तथ्याङ अनुसार जिल्लाका जलजला, दगान्तुडाडा, ग्वालीचौर,बुत्र्तिवाङ ,बोवाङ र दर्लिङलाई बढि क्षयरोगका बिरामी रहेका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दिपकप्रसाद तिवारीले बताए ।
नेपालको कुल जनसङख्या मध्य करिव ८० हजार व्यक्ति क्षयरोगबाट प्रभाववित रहेका छन । ५ देखि ७ हजार सम्म क्षयरोगको कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
शिविरमा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर सागरकुमार राजभण्डारी, जनस्वास्थ्य निरिक्षक रामप्रसाद खनाल, ल्याब टेक्निसियन अनन्त न्यौपाने डिल्ली प्रसाद आचार्य, कृष्ण बहादुर भण्डारी लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य जाँच सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेका थिए । कार्यक्रम तथ्याङक सहायक घनश्याम सापकोटाको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
सहकार्य र सहमतिका नाममा केन्द्रीय मापदण्ड संग जुध्ने कुनैपनि कार्य हुन्न- लामिछाने
माओबादी केन्द्रको आयोजनामा रनसिँह किटेनीमा वडा कमिटी गठन !